घरको छतबाट आवाज आइरहन्थ्यो, ६ महिना वास्तै गरिनन्, ६ महिनापछि हेर्दा सबै जना चकित - Darshan Nepal News
मुख्य पृष्ठ /रोचक/घरको छतबाट आवाज आइरहन्थ्यो, ६ महिना वास्तै गरिनन्, ६ महिनापछि हेर्दा सबै जना चकित
घरको छतबाट आवाज आइरहन्थ्यो, ६ महिना वास्तै गरिनन्, ६ महिनापछि हेर्दा सबै जना चकित
एजेन्सी। छतबाट अनौठो आवाज आइरहन्थ्यो । ६ महिनादेखि यस्तो चलिरहेको थियो । एक दिन यसको जाँच गर्दा यस्तो वास्तविकता खुल्यो कि खुट्टामुनिबाट जमिन नै भासियो । घटना अमेरिकाको जर्जियाको हो ।
दुई हजार महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले परफ्यूम पनि प्रयोग गर्दछन, जसले आफ्नो पार्टनरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् ।
उक्त समयमा महिलाहरुले से क्सी लुक पाउन नियमित व्यायाम गर्ने, टाइट फिटिङ कपडा लगाउने, शर्ट स्कट र गहना लगाउनले पनि सर्भेका क्रममा भेटिएका हो । एजेन्सी
यस कारण गरिन्छ शिवलिंगको पूजा आज थाहा पाउनु होस
सिन्धुलीको सडकमा देबिको ड*रलाग्दो श*क्ति , देबिको शिरबाट गाडी कुदाउदा गाडिको भयो यस्तो !
हजुरलाई थाहा छ ? एक मुखे रद्राक्ष को दर्शनले नसोचेको धन “लाभ” हुन्छ
आफुलाइ गाडी किन्न छुट्याएको पैसाले जनतालाई एम्बुलेन्स किन्ने उपमेयर ! सम्मान गरौ ।।